China CRUSHER LINERS Ball Mill Liners စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Xingtejia
1. သတ္တုများပုံသွန်းလုပ်ငန်းစဉ်: ဗဓေလသစ်သဲမှို Cast သို့မဟုတ် Shell ကမှိုတိကျစွာသတ္တုများပုံသွန်း
၂။ ပစ္စည်း - ASMT A 128 မန်းဂနိစ်၊ ASTM A 532 ခရူသံဖြူနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောခရိုအဖြူရောင်သံ။
သွန်း၏ 3. ရှုထောင်သည်းခံစိတ်: DIN EN ကိုက ISO 8062-3 တန်း DCTG8-10
သွန်း၏ 4. ဂျီ ical မေတြီသည်းခံစိတ်: DIN EN ကို ISO 8062 - တန်း GCTG 5-8
XTJ သည်သွန်းလောင်းရာတွင်အဓိက ဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီး OEM နှင့် aftermarket crusher အော်ပရေတာများအတွက် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ စွမ်းအင်စက်ရုံများ၊ သံမဏိ၊ ဘိလပ်မြေနှင့်စက္ကူစက်ရုံများမှဖောက်သည်များအားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းအတွက် ၁၂ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် crusher liners များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကို ၀ တ်ဆင်သည်။ အထူးဒီဇိုင်းနှင့်အထူးပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုစီအတွက်အထူးတီထွင်ထားသောဒီဇိုင်းနှင့်သတ္တုစပ်များတပ်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိအရောင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာဌာနများသည်သုံးစွဲသူများနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးဆန်းသစ်သောအင်ဂျင်နီယာစိတ်ကြိုက်ကြိတ်ခွဲစက်များနှင့်ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုများနှင့်ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဝတ်ဆင်ရန်အတွက်မည်သည့်အရာလိုအပ်သည်ကိုအတိအကျဆုံးဖြတ်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ wear အစိတ်အပိုင်းများသည်သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ခံနိုင်သောသတ္တုစပ်များဖြစ်သော ASMT A 128 manganese၊ ASTM A 532 Chrome အဖြူရောင်သံနှင့်အပျော့စားသံမဏိပြားများပေါ်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသော chrome အဖြူရောင်သံများနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ISO 9001 အသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်အရည်အသွေးသေချာစေရန်အဆင့်များစွာတွင်တင်းကြပ်သော QA နှင့် QC အစီအစဉ်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးရှိသော cone crusher liner များနှင့်အောက်ရှိ wear အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
ဤအပိုင်းများ၌ကျွန်ုပ်တို့သုံးသောပစ္စည်းများသည်များသောအားဖြင့်မြင့်မားသောခရိုမီယမ်သံမဏိများဖြစ်သည်။ Chrome သံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အထူးဂရုပြုမှုရှိသည့် anti-wear ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွိုင်းသံမဏိများထက် wear ခံနိုင်မှုပိုမိုမြင့်မားသည်။ သာမာန်အဖြူရောင်သံများထက်မာကျောမှုနှင့်ခိုင်ခံ့မှုများစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်ကောင်းမွန်သောအပူချိန်နှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာသို့ထိုကဲ့သို့သောသတ္တုများကိုသွန်းလောင်းပေးနေသည်။
GB ကို / T က 8263 BTMNiCr2, BTCr9Ni5, BTMCr2, BTMCr8, BTMCr12, BTMCr15, BTMCr26
Din 1695 0,9610, 0.9620, 0.9625, 0.9630, 0.9635, 0.9640, 0.9645, 0.9650, 0.9655
က ISO 21988 HBW555XCr13, HBW555XCr16, HBW555XCr21, HBW555XCr27, HBW600XCr20Mo2Cu
ပွန်းပဲ့မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောသတ္တုစပ်များကိုသံမဏိများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောသတ္တုစပ်များ၊ မြင့်မားသောခရိုမီယမ်သတ္တုစပ်များ၊ အဖြူရောင်သတ္တုစပ်များနှင့်နီခဲသတ္တုစပ်များအဖြစ်လည်းရည်ညွှန်းသည်။ သတ္ထုတူးဖော်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ မြေကြီးတပြင်စီမံခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသောပွန်းစားမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်မြင့်မားသောသတ္တုစပ်များကိုသံချေးသတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
လူအများစုအနေဖြင့်မြင့်မားသောခရုမ်းအဖြူရောင်သံကိုစက်ဖြင့် ပြုလုပ်၍ မရပါဟုထင်မြင်ကြသော်လည်း XTJ တွင် CBN ကိရိယာများသည်မြင့်မားသောခရုမ်းအဖြူရောင်သံစက်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ မြင့်မားသောခရုမ်းအဖြူရောင်သံများကိုလည်းတူးရန်နှင့်ပုတ်ရန်အတွက်ပျော့ပြောင်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်အနည်းဆုံး ၅၆HRC သို့မာကျောနိုင်သည်။
XTJ သည် ASTM A532 စံနှုန်းနှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီသောပွန်းပဲ့ဒဏ်ခံနိုင်သောသတ္တုစပ်များကိုဂုဏ်ယူစွာကမ်းလှမ်းသည်။
● ASTM A532 အမျိုးအစား ၁ အမျိုးအစား
● ASTM A532 အမျိုးအစား ၁ အမျိုးအစား B
● ASTM A532 အမျိုးအစား ၁ အမျိုးအစား C
● ASTM A532 Class I အမျိုးအစား D
● ASTM A532 အတန်းအစား II အမျိုးအစား A
● ASTM A532 အမျိုးအစား II အမျိုးအစား B
● ASTM A532 အမျိုးအစား II အမျိုးအစား D
● ASTM A532 အတန်းအစား III အမျိုးအစား
ရှေ့သို့ သံမဏိဆန်သည့်ဘားများကိုသွန်းလောင်းပါ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအချို့ကိုစွမ်းအင်မီးဖို၌ထားပါ
နောက်တစ်ခု: ဆန်ခါနှင့်ချည်နှောင်နယ်လှည့် & ဆန်ခါမီးဖိုပေါ်တွင်ပန်းကန်ဝတ်ဆင်